true targets /zu-ZA/tools-for-life/targets/steps/administrative-scale.html quiz 2 9 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/targets_zu_ZA.jpg Ama-Targets kukanye nemiGomo
Yini injongo yokuhlela? 3 Isitatimende esilula ngokuhlela kuwukuthi kunenjongo yokwenza ukuhlela kube ngokoqobo. Into eyiqiniso yinto yangempela, hhayi into esemcabangweni womunye kuphela. Isitatimende esilula ngokuhlela kuwukuthi kunenjongo yokwenza ukuhlela kube ngokoqobo. Into eyiqiniso yinto yangempela, hhayi into esemcabangweni womunye kuphela. /zu-ZA/tools-for-life/targets/steps/making-planning-an-actuality.html#answer-1 Ukwenza Ukuhlela kube Iqiniso Ukusenza sizizwe kangcono uma singahlelekile. Ukubhala phansi yonke imibono. Ukwenza indawo yokuhlanzeka ekhaya noma emsebenzini. Ukwenza ukuhlela kube iqiniso. Noma yiluphi uhlelo lungenziwa futhi lulethe lokho okufanele likulethe uma ngabe luhlelwe kahle. 0 Noma ngabe uhlelo lwalulukhulu kakhulu noma lwamukeleka kwabanye kuphela, noma lungadingekile, bekungenzeka ukuthi lwenzeke. Noma yiluphi uhlelo lungenziwa futhi lulethe lokho okufanele likulethe uma ngabe luhlelwe kahle. Noma ngabe uhlelo lwalulukhulu kakhulu noma lwamukeleka kwabanye kuphela, noma lungadingekile, bekungenzeka ukuthi lwenzeke. Noma yiluphi uhlelo lungenziwa futhi lulethe lokho okufanele likulethe uma ngabe luhlelwe kahle. /zu-ZA/tools-for-life/targets/steps/making-planning-an-actuality.html#answer-2 Ukwenza Ukuhlela kube Iqiniso Iqiniso Amanga
QAPHELA: Unezimpendulo eziningana ebezingalungile. Ukuze uqhubeke, kufanele uphinde ufunde indatshana Ukwenza Ukuhlela kube Iqiniso bese uhlola ukuqonda kwakho futhi.